Maxaa sababi kara burburka Xiriirka Lamaahana? - Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»Maxaa sababi kara burburka Xiriirka Lamaahana?
Waxaan halkan ku soo bandhigeynaa waxyaabaha keeni kara in uu buburo xiriirka ka dhaxeeya labada qof ee lamaanaha ah.
Labada Ruux ee ka dhaxeeya xiriirka waa in ay aad uga fogaadaan beenta waayoo Beenta waxey ugu horeysaa waxyaabaha keenta kala taga Lamaanaha.
Wargeyska Newyork Post: Ilhaan Cumar Waxay $150,000 oo dheeraad ah siisay jacaylkeeda cusub Tim Mynett
Waxaa marwaliba wanaagsan in aad noqoto qof runta sheega intii aad been ku wadi la heyd xiriirkaaga.
Waxaa wanaagsan inta aan la isguursan in shukaansiga ama haasawaha lagu saleeyo runta isla markaana laga fogaado been oo idil.
Labada Ruux ee isjeclaaday waxaa u muhiimsan in ay isku hayaan kalsooni buuxda, taasi oo udub dhaxaad u noqon karta xiriirkooda.
Waxaa lama huraan ah in labada qof ay isku qabaan kalsooni oo hadeysan meesha aalin kalsoonida wax soconayo ma jiraan.n waana in lamaanaha uu ku kalsonado midba kan kale.
3-Isfahan daro:isfahan darada ama qilaafka marwalba wuu imaan kara oo waxa la yahay bila’aadan daciif ah hadana waa in la isku daya in si dagdag ah wax lo xaliyo si uusan qilaafku u gaarin meel sare.
Xiriirka nolosha ee ka dhaxeeya laba qof waa in uu noqdaa mid marwaliba aad looga fekero, maadaama labada ruux ay yihiin kuwa doonaya mustaqbal wanaagsan.
Go’aan qadashadu ma aha wax Fudud oo furiinku waxa uu ubahan yahay ka fikir dheer oo wa in aad uga fikirta sidii aad markii aad guursaneyso.
Cudurada Halista Ah Ee Lagu Daaweyn Karo Ukunta (Cudurro Lama Filaan Ah Oo Ku Jiro)